Mashiinka Dabaqa (2) Warshad - Mashiinka Dabaqa Shiinaha (2) Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Mashiinka Cadayashada ee badan-shaqo BD1A
Mashiinka cadayashada waa mashiin lagama maarmaan u ah inuu cadayo sagxada adag, waa mashiin xawaare yar (154 rpm), marka dabaqaagu leeyahay wasakh dhulka ku jirta oo aad u baahan tahay inaad xoogaa muruq ah ku xoqdo, si fiican u isticmaal xoogaa xalka nadiifinta, burushka u sii wad nadiifi sagxaddaada. Mashiinka burushka badan ee shaqeynaya ayaa fududahay in la shaqeeyo, badbaado iyo saameyn nadiifin fiican. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay nadiifinta roogga, dabaqa, nadiifinta xawaaraha hoose ee noocyada kala duwan ee dabaqa iyo dib u habeynta dusha sare ee hoteelada, makhaayadaha, dhismooyinka xafiisyada iyo hoolalka bandhigga.
Multi-function Mashiinka cadayashada BD2A
Waa gacan qabsi gacan qabad multifunctional u ogolaanaya hawl anfacaya oo fudud.
Loogu talagalay sanduuqa marshada, mootada laba-qaboojiye iyo awood sare oo ka dhigaysa mashiinka mid aamin ah oo awood badan.
Mashiinka AC monopole asynchronous waxaa laga sameeyaa soo dejinta silikoon-bir ah oo qabow oo duuban
go'yaal tayo sare leh, sidaa darteed waxay leedahay awood sare, lumis hoose iyo kuleyl. Qalabka dib-u-habeynta leh ee qorshaysan waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo tayo sare leh si loo yareeyo buuqa iyo jaangooyooyinkan helical-ka waxaa laga sameeyaa POM oo leh tayo sare.
Waxay leedahay muuqaal qurux badan oo moodle ah waana sahlan tahay in la shaqeeyo.
Ka dib markii wax loo qaso nadiifinta sagxadda sagxadda waxay u dhalaalaysaa sidii muraayad oo kale.
Waxaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo sagxadda dhammaan noocyada alaabada dhagaxa xawaaraha waa 1500 rpm mootada gebi ahaanba way xiran tahay.